ZOARA FANANTENANA – vaovao
Tetikasa mampiavaka ny Fiangonana Zoara Fanantenana ny Varin’i Jesoa. Akana 1 sotro isaky ny kapoaka ny vary arotsaka. Angonina iny ary aterina aty ampiangonana rehefa alahady. Amidy amin’ny sarany ariary 100 ariary monja ny kapoaka ho an’ireo fianakaviana sendra fahasahiranana mivavaka eto amin’ny Zoara Fanantenana. Misy ny fanadihadiana tontosain’ny Sampana Dorkasy ka izay tokatrano ao anatin’ny lisitra avokoany ihany no mahazo manjifa ilay vary amidy mora isaky ny alatsinainy. Fampiharana ny baikon’i Jesoa Kristy hoe « Didy vaovao no omeko anareo dia ny hifankatiavanareo… » (Jaona 13:34a) ny varin’i Jesoa izay iarahan’ny Fiangonana Zoara fanantenana Ambohipo manatanteraka. Ladies watch
– Filazantsara nosoratan’i Matio, toko faha 10 andininy 42: « Ary na zovy na zovy no manome rano mangatsiaka na dia eran’ny kapoaka ihany aza hosotroin’ny iray amin’ireo madinika ireo, satria mpianatra izy, dia lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa tsy ho very ny valimpitiany« . Rado replica
Anaovana tahiry manokana ny vola vidin’ny vary azo amin’ny tetikasa “varin’i Jesoa”. Io vola io sy mantsy no ividianan’ny fiangonana ny sakafon’ny mpiantafika rehetra mandritra ny rodorodom-pitoriana tanterahana isan-taona. Ampy hiantohana ny sakafon’ny mpiantafika maherin’ny 500 intelo isanandro eny andalana mandroso sy miverina ary koa mandritra fijanona amin’ilay tanana anaovana ny fitoriana ny tahiry amin’ity kitapombola ity. fake watches